Inhlangano ikhala ngezikhala ezingavaliwe kuze kube manje - Bayede News
Isithombe: Judges Matter
Sekuhlangene unyaka umhlaba wonke wahlaselwa ubhubhane ukhuvethe ukugadla kwalo okusazwela namanje. Izazi zithi isimo sisazoqhubeka sibe nzima njengoba ziqagula isivuvu sesithathu salesi sifo.
Kuyaziwa ukuthi mkhulu umonakalo odalwe ukhuvethe cishe kuyona yonke imikhakha yempilo okubalwa amabhizinisi, ukulahleka kwemisebenzi, indlela abantu abaphila nabenza ngayo izinto nsuku zonke njalo njalo.
Nasezinkantolo ukusebenza kwazo kuguqukile njengoba amanye amacala esequlwa kusetshenziswa izindlela zokuxhumana zobuchwepheshe. Kepha njengoba luqhubeka ukhuvethe, iKhomishini Yezobulungiswa, iJudicial Service Commission (JSC) – okuyiyo ebhekelela ukugcwaliswa kwezikhala zabehluleli basezinkantolo – isithole ukugxekwa ngokwehluleka ukwenza umsebenzi wayo okubukeka kuzoba nomthelela omubi emnothweni waseNingizimu Afrika.
Inhlangano iJudges Matter osekunesikhathi ibheka ezobulungiswa futhi yenza ucwaningo ngemigudu yokulawulwa kwezobulungiswa, ukuziphatha kwezinkantolo, ukuqokwa kwamabamba abehluleli, ukucubungula indlela iJSC eqoka ngayo abazongenela izikhundla zabehluleli nokunye, ithi kuze kube yimanje izinkantolo zibe neqhaza elifinyeziwe ekunciphiseni umthelela omubi kwezomnotho odalwe ukhuvethe.
Ithe njengoba kungenwa onyakeni wesibili kunalolu bubhane, iziNkantolo Eyezisebenzi neYokwedluliswa Kwamacala Okuncintisana kungenzeka zidingeke kakhulu.
IJudges Matter ithi yingakho kukhathaza ukuthi njengoba iJSC izohlangana ngoMbasa nonyaka, isinqume ukungazigcwalisi izikhala zobuholi ezibucayi kulezi zinkantolo.
INkantolo Yezisebenzi Lena yiNkantolo ekhethekile futhi enamandla alinganayo naweNkantolo Enkulu eNingizimu Afrika. Yasungulwa ngaphansi kweLabour Relations Act ngowe-1995 ingena esikhaleni sezinkantolo ezindala zezimboni ngenhloso yokuqhuba isethembiso sedemokhrasi sokulingana phakathi kwazisebenzi nabaqashi.
Le Nkantolo ibhekana nezingxabano ngokwezomsebenzi ezilethwe kuyo iCommission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) futhi ihumusha yonke imithetho yezezisebenzi.
Ukhuvethe nomphumela walo eNkantolo Yezisebenzi
Kuyaziswa ukuthi ukhuvethe luholele ekudilizweni kwenqwaba yezisebenzi nokuncishiswa kwamahora okusebenza. Ngaphezulu kwalokhu abe maningi amacala ezisebenzi angene kule Nkantolo ngalesi sikhathi kuze kube yimanje asangena. Obekuphikiswana kakhulu ngakho ngonyaka odlule bekumayelana nezinyathelo okufanele zithathwe ukuvikela izisebenzi ekuthelelekeni ngokhuvethe nokuthi ziphinde zivulwe izindawo zokusebenza sezinazo izindlela zokuphepha.
Ecaleni i-AMCU v Minister of Minerals and Energy iNkantolo Yezisebenzi yacelwa ukuba inqume ngezinyathelo zokuphepha ezidingekayo ukuvikela izisebenzi ezingaphezulu kwezi-400 000 embonini yezimayini.
Okukhathaza iJudges Matter ukuthi le Nkantolo iholwa uMengameli Wabehluleli uBashir Waglay ozinze eCape Town ekubeni igatsha lale Nkantolo elimatasa kakhulu liseGoli. Lapho iPhini likaMengameli Wabehluleli kujwayele ukuthi libe khona. Kodwa sekuphele iminyaka emine isikhala sePhini likaMengameli Wabehluleli singenamuntu kubambe uMehluleli uViolet Phatshoane ozinze eKimberley.
Le nhlangano ithi ngowezi-2019 iJSC yakhangisa inhlolokhono yalesi sikhala kodwa yabuye yakumisa ukuhlolwa kwababili ababegaqele lesi sikhundla.
Kuze kube yimanje iJSC ayikaze iphinde isikhangise lesi sikhala futhi kubukeka sengathi ayinazo izinhloso zokusivala, kukhala iJudges Matter.
Akukho ukunqamulela uma kubhaliswa izingane
NgoNdasa wezi-2020 ukhuvethe lwaholela esidingweni esikhulu sezivikeli okwathi ngokubona lokhu ezinye izinkampani zenyusa intengo yazo ngendlela exakile. ICentrum Pharmacy eBoksburg yenyusa intengo yezinye zezivikeli eziyisidingo ngamaphesenti afinyelela kwangama-261 kwathi iBabelegi Workwear yona yakhuphula izifonyo zisuka kuma-R41 zaya ngaphezulu kwama-R500 okungamaphesenti angama-500.
Womabili la macala athathwa iKhomishini Yokuncintisana. EleCentrum Pharmacy laphothulwa kepha eleBabelegi Workwear ladlulela eNkantolo Yokucintisana eyathola le nkampani inecala lokwenyusa intengo yempahla yayihlawulisa izi-R76 040.
Le nkampani icala yaledlulisela eNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Okuncintisana lapho uMengameli Wabehluleli uDennis Davis, ngaphambi kokuba athathe umhlalaphansi, avumelana nesinqumo seNkantolo Yokuncintisana kepha wayichitha inhlawulo eyayinikwe iBabelegi Workwear.
IJudges Matter ithi ukuthatha umhlalaphansi kukaMehluleli uDavis kuvula esinye isikhala eNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Okuncintisana phezu kwalokho iJSC ayikabahlungi abazovala lesi sikhala. Le nhlangano ithi, lokhu kusho ukuthi le Nkantolo izosala ingenamholi nokushoda kwabehluleli ngalesi sikhathi lapho kubukeka ezokwanda amacala okuzomele iwahlalele aqondene nokhuvethe.
IJudges Matter ithi ukwehluleka kweJSC ukuhlunga nokuvivinya abangangenela izikhundla zokuhola eNkantolo Yezisebenzi naKweyokwedluliswa Kwamacala Okuncintisana kuwukwehluleka ukwenza umsebenzi okukhulu ikakhulukazi njengoba sekuphele iminyaka emine isikhala sePhini likaMengameli Wabehluleli singavaliwe.
“Abezomthetho abaningi babika isimo esibi enkantolo yaseGoli esenziwe saba sibi ukhuvethe. Inkantolo idinga umholi omuhle nomlawuli ozobhekana nokusalela emuva okudalwe imvalelwakhaya.
Uma ubheka ukuthi ukuhlangana kweJSC kwangoMbasa ngeke kuluthinte udaba lwezikhala ezikhona, sicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi iJSC ikhangise lezi zikhala ezikhona ngokushesha futhi ikulungise lokhu kulokhu kuhlangana kwangoMbasa,” kusho iJudges Matters igcizelela ukuthi ukulinda ukuhlangana kwangoMfumfu nonyaka kuyobe sekwedlule isikhathi kanti nomthelela omubi wezomnotho ezisebenzini nakubathengi uyobe usumkhulu kakhulu.
nguSabelo Mbatha Apr 9, 2021